people Nepal » निर्वाचन आयोगमा कसले दर्ता गर्‍यो ‘नेकपा एमाले’ ? निर्वाचन आयोगमा कसले दर्ता गर्‍यो ‘नेकपा एमाले’ ? – people Nepal
Posted on July 1, 2020 by Durga Panta
प्रकाशित मिति: बुधबार, आषाढ १७, काठमाडौं । नेकपाभित्र सरकार तथा पार्टी सञ्चालनको विषयलाई लिएर विवाद भइरहेका बेला निर्वाचन आयोगमा ‘नेकपा एमाले’ नामको दल दर्ताका लागि निवेदन परेको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेर दर्ता भएपछि नेकपा एमाले नामको दल हाल आयोगमा दर्ता छैन